Budata Kernel Adiutor APK maka Android
Budata Kernel Adiutor
Free Budata maka Android (4.80 MB)
Budata Kernel Adiutor,
Site na ngwa Kernel Adiutor, ị nwere ike ibelata ọsọ nhazi nke ngwaọrụ gam akporo gị gbanyere mkpọrọgwụ wee si otú a chekwaa ọtụtụ okwu.
Ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo bụ sistemụ arụmọrụ dabere na Linux, a na-eji usoro LMK (Low Memory Killer) na mgbagha arụ ọrụ nke RAM. Nikwu ya nụzọ ọzọ, usoro a, nke pụtara Low Memory Killer na English, dị na ngwaọrụ Android niile.
Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo ngwaọrụ ochie, ị nwere ike na-ezute ọtụtụ ngwaike nsogbu. Ngwa Kernel Adiutor na-enyekwa gị ohere ịkwalite ngwaike nọtụtụ okwu dị ka ibelata ọsọ nhazi gị, oriri batrị, nnabata Wi-Fi. Na mgbakwunye, ngwa Kernel Adiutor, ebe ị nwere ike ime mgbanwe dị iche iche site na itinye aka na ngwaike dị ka ihuenyo na ụda, na-enyere gị aka imeziwanye ojiji nke ngwaọrụ gị.
Nke a bụ ihe ị nwere ike nyochaa wee dezie site na Kernel Adiutor:
Processor (Ugboro na jikwaa)
Onye nhazi I/O
Njikọ otu ibe kernel
Mgbochi nchekwa dị ala
mebere ebe nchekwa
Flash na ndabere
init.d nchịkọta akụkọ
Mara: Ngwa ahụ na-arụ ọrụ naanị na ngwaọrụ gbanyere mkpọrọgwụ. Ọ bụ gị na-ahụ maka nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite mgbe ị na-eji ngwa ahụ.
Kernel Adiutor Ụdịdị
Mmepụta: Willi Ye